१ सय १३ ब्यक्तिमा इन्फ्लुएन्जा ए–एच१एन१ प्रमाणित - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ सर्ने/नसर्ने रोग ∕ १ सय १३ ब्यक्तिमा इन्फ्लुएन्जा ए–एच१एन१ प्रमाणित
१ सय १३ ब्यक्तिमा इन्फ्लुएन्जा ए–एच१एन१ प्रमाणित
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७६ भदौ ९ गते, ०९:५६ मा प्रकाशित
काठमाडौं—राजधानीलगायत देशभर एक हप्तामा १ सय १३ ब्यक्तिमा प्रयोगशाला प्रमाणित मौसमी रुघाखोकी देखिएको छ । कतिपय चिकित्सकहरुले यसलाई स्वाइन फ्लु अर्थात मौसमी इन्फ्लुएन्जा (रुघाखोकी) अन्तर्गत रहेको ‘इन्फ्लुएन्जा ए–एच१एन१’ पिडिएम ०९ भन्ने गरेका छन् ।
गत वर्षको तुलनामा भने यस हप्ता केही कमी हो । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार २०१८ को यही हप्ता १ सय ६५ ब्यक्तिमा ‘इन्फ्लुएन्जा ए–एच१एन१’ प्रमाणित भएको थियो । यो मौसमी रुघाखोकीको समय हो ।
महाशाखाका अनुसार मोरङमा ११, काठमाडौंमा ९, ललितपुर ७, पाल्पा ६, रुकुम पश्चिम ६ साथै अन्य विभिन्न जिल्लामा देखिएको छ । अधिकारीले गत वर्षको अनुपातमा धेरै बढेको नदेखिए पनि सरकार तयारी अवस्थामा बसेको बताए ।
इन्फ्लुएन्जा एक संक्रामक रोग
सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन भन्छन्, ‘इन्फ्लुएन्जा एक संक्रामक भाइरल रोग हो, यो टाइप ए भाइरसका कारणले हुन्छ ।’ उनका अनुसार भाइरस शरीरमा प्रदूषित हावालाई श्वासका माध्यमले भित्र जाँदा वा कुनै प्रदूषित वस्तुलाई छोई आँखा, नाक र मुखलाई छोएको खण्डमा शरीरभित्र प्रवेश गर्छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार मौसमी रुघाखोकीको लक्षण निकै कडा हुन्छ । एक सय चार डिग्री वा त्यसभन्दा बढी ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अल्छी लाग्नु र कमजोरिपनाजस्ता समस्या हुनु यसका लक्षण हुन । डा. पुनका अनुसार कतिपय बिरामीले वान्ता हुनुका साथै पखाला समेत लाग्नेगर्छ ।
जोखिममा रहेका समूह
चिकित्सकहरूका अनुसार दम, श्वासप्रश्वास रोगको समस्या भएकालाई मौसमी रुघाखोकीको संक्रमण बढी हुन्छ । मधुमेह, मुटु, कलेजो र स्नायु रोग भएका पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्छन ।
गर्भवती, वृद्धवृद्धा, ५ वर्षमुनिका बालवालिका यसबाट जोगिनु पर्छ । त्यसैगरी अंग प्रत्यारोपण गराएका, एचआईभी एड्स वा अन्य कारणले रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएका, क्यान्सरको उपचार गराइरहेकाहरू उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
चिकित्सकहरुका अनुसार साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुपर्छ । खोक्नु वा हाच्छिउँ गर्नुअघि रुमालले मुख छोप्नुपर्छ । प्रयोगमा ल्याएको रुमाल तातो पानीमा छोएर सुकाउनुपर्छ । जसले गर्दा संक्रमित किटाणु मर्छ । संक्रमित व्यक्तिले जमघटमा जानु हँुदैन । ठिक नहुदासम्म आराम गर्नुपर्छ ।
अत्याधिक ज्वरो आउनु
वान्तासहित पखाला लाग्नु
घाँटी खसखसाउनुे क्रम बढ्दैं जानु
टाउको धेरै दुख्ने, शरीरका मांसपेसी दुख्नु साथै अत्यधिक थकाइ लाग्नु
सामान्य रुघाखोकीमा जस्तो नाकबाट पातलो पानी बग्नु
हाच्छिउँ आउनु, खोकी लाग्नु यसका लक्षण हुन् ।